News - Si loo xalliyo xaaladda dhoofinta ba'an ee warshadaha kabaha Shiinaha ee ……
GUDDIGA AAN SHAQAALAHA AHAYN
GUDDIGA XAFIDDA WAALIDKA
SHAQAAL KU SAABSAN GUDDIGA
DHAQANKA AAN LAHAYN
Suul PUFF IYO XISAABIN
XAASHA DHALASHADA KULUL
Si loo xalliyo xaaladda dhoofinta daran ee warshadaha kabaha Shiinaha ee ……
Si loo xalliyo xaaladda dhoofinta ba'an ee warshadaha kabaha Shiinaha sannadihii la soo dhaafay iyo sahaminta kalsoonida tartanka, Xinlian Shoes Supply Chain Co., Ltd. iyo Shoedu Real Estate Development Co., Ltd. waxay si wada jir ah u abuureen kabo isku dhafan oo khadka tooska ah iyo khadka toosan ah. hannaanka silsiladda wax lagu kala iibsado ee silsiladda -—- Xarunta Kabaha Shishka Bixinta Shiinaha ee Kabaha Shiinaha (oo hadda kadib loogu yeero "Xarunta Ganacsiga"). Mashruucu wuxuu ujeedkiisu yahay in la isku daro ilaha warshadaha kabaha, si qoto dheer kor loogu qaado isbedelka iyo casriyeynta silsiladda warshadaha kabaha ee Shiinaha, abuurista nidaam deegaan oo ganacsi oo diiradda saaraya silsiladda keenista kabaha, iyo ballaarinta dhulka barwaaqada leh ee ganacsiga caalamiga ah.
Waxaa lagu soo waramayaa in Xarunta Ganacsiga ee Kabaha Shiinka ee Shiinaha ay ku taal daanta Webiga Feiyun ee Wenzhou · Ruian, oo ah magaalada gobolka ee Rui'an Overseas Chinese Town Town iyadoo horgalaha ah "Qiao" ee Gobolka Zhejiang, waxayna ku taal “iskutallaabta dahabiga ah” ee jidadka tareenka, xawaaraha sare iyo jidadka waaweyn ee qaranka. Wejiga koowaad wuxuu leeyahay aag dhisme ah oo qiyaastii ah 100,000 oo mitir murabac ah, oo daboolaya afar taambuug oo waaweyn oo ah qalabka kabaha, kabaha ragga, kabaha haweenka, iyo kabaha carruurta. Waxa kale oo ay leedahay xarun bandhig caalami ah oo caan ah oo lagu soo bandhigayo kabaha, xarun calaamadeysan, xarun cilmi baaris tikniyoolaji iyo xarun horumarineed, xarun isbadal lagu gaarayo, iyo qalab caqli badan Shanta meelood ee gaarka ah ee xaruntani waxay dhexgalaan barta internetka ee dadka caanka ah laga sii daayo ee baahinta tooska ah, e-commerce-abuurka dadka badan. tas-hiilaadka kale ee taageeraya warshadaha, iyo sidoo kale tas-hiilaadka taageerada dadweynaha sida xarumaha cuntada iyo hoolalka diyaafadaha waaweyn, si loo abuuro saldhig casri ah oo lagu dalbado kabaha.
Ugu horreyntii, Xarunta Ganacsiga ee Kabaha Shiinaha ee Shiinaha waxay isku daraysaa laba goobood oo internetka ah oo si madax-bannaan ay u soo saartay shirkadda Xinlian E-commerce, oo ah adeegga adeegga ee kabaha silsiladda kabaha "Shoe Netcom" iyo suuq-geynta caalamiga ah iyo dhoofinta ee warshadaha kabaha "Ganacsiga Kabaha Port ”iyada oo loo marayo labada istiraatiijiyad Awood siinta xarunta ganacsiga, dhisida qaab ganacsi oo cusub oo ah ganacsiga + internetka, fidinta shabakadda oo dhan, iyo furitaanka kor iyo hoos ee silsiladda warshadaha kabaha si loo xalliyo asymmetry ee macluumaadka kheyraadka warshadaha kabaha. .
Marka labaad, Xarunta Ganacsiga ee Kabaha Shiinaha ee Shoes waxay dhistay suuq ganacsi oo jidheed oo offline ah oo mitir laba jibbaaran 100,000. Dabaqa afaraad ee dhismaha weyn ee xarunta ganacsiga, aag lagu soo bandhigayo kabo ayaa loo habeeyay, xarun carwo caalami ah ayaa lagu dhisi doonaa iyadoo martigalin doonta daraasiin carwooyin sanadle ah. , Abuuritaanka nidaamka deegaanka agglomeration warshadaha kabaha. Kuwaas waxaa ka mid ah, waxaa xusid mudan in iyadoo taageero xoog leh ka heleysa Ururka Qaramada Midoobay ee Horumarinta Warshadaha ee Shanghai Global Science and Technology Center iyo Dowladda Hoose ee Ruian, xarunta ganacsiga ayaa sidoo kale martigalin doonta laba dhacdo oo caalami ah sanad kasta, Global Light Industrial Commodities (Shoes) Shiinaha (Ruian) Expo iyo silsiladda iibsiga silsiladda iibka silsiladda. Si joogto ah u martiqaad iibsadayaasha caalamiga ah, midee macaamiisha dibedda, iibsadayaasha waaweyn, noocyada caanka ah iyo barnaamijyada ganacsiga e-commerce, iwm.
Ugu dambeyntiina, Xarunta Ganacsiga ee Kabaha Shiinaha ee Shoes waxay adeegsataa afarta aasaas iyada oo ah barta taageerada ee kor loogu qaadayo warshadaha kabaha.
Ta hore waa soo-saarista, waxbarashada iyo saldhigga cilmi-baarista halkaasoo ay ku kulmaan hibada warshadaha kabaha: xarunta cilmi-baarista iyo horumarinta, xarunta is-beddelka guusha, xarunta naqshadeynta kabaha, xarunta sameynta kabaha, isbahaysiga hantida aqooneed ee kabaha adduunka, iwm. Sayniska iyo Teknolojiyada R&D Center waxay gacmaha la saareysaa keydka kabaha si loo kordhiyo nuxurka tikniyoolajiyadda ee alaabooyinka iyadoo loo marayo dijitaalka kabaha; Xarunta Naqshadeynta Muunadda Kabaha waxay ku martiqaadeysaa 600 kooxo naqshadeeyayaal iyo nashqadeeyayaal caan caalami ah oo kabo ah si ay u sameystaan ​​isbaheysi muunad kabo caalami ah oo kaashanaya alaabada shirkadaha kabaha.
Midda labaad waa saldhigga tooska loogu tabinayo dadka caanka ah ee khadka tooska ah ka caawiya shirkadaha kabaha inay soo jiitaan oo ballaariyaan iibka. Iyadoo loo marayo tijaabinta iyo baahinta tooska ah ee dadka caanka ah, waxay la imaan karaan alaabooyinka alaabada kabaha shirkadda.
Midda saddexaad waa saldhig sameeye e-ganacsi, e-commerce oo internetka ah iyo is-iibsi isku mar ah oo toos ah, wadaagga kanaallo badan.
Tan afraad waa heerka iskaashiga istiraatiijiyadeed ee dibedda ee lagu taageerayo adeegyada, sida dhismaha tiknoolajiyada maaliyadeed ee xannibaadda leh Bangiga Ningbo si loo xalliyo dhibaatooyinka maaliyadeed ee adag iyo kuwa qaaliga ah ee shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, loo fududeeyo wareejinta lacagaha ganacsiga shirkadaha, lana soo nooleeyo silsiladii raasamaalka.
Marka la soo koobo, Mashruuca Xarunta Ganacsiga ee Kabaha Shiinaha ee Shiinaha wuxuu ku saleysan yahay "laba madal oo khadka tooska ah ah + offline offline 100,000-mitir laba jibbaaran suuqa ganacsiga + N amarrada carwooyinka" si loo gaaro cinwaanka "kabaha caalamiga ah ee dalxiiska casriga ah ee kabaha caalamiga ah" ee isku xira khadka tooska ah iyo kan khadka tooska ah . Si loo abuuro silsilad caalami ah silsilad agglomeration agglomeration.
Waqtiga boostada: Aug-25-2020
Si loo xaliyo situa dhoofinta daran ...
Ku xirxirida duub. gudaha polybagbag leh o ...
In "kor u kaca qiimaha" ee p ...
Cinwaanka: Aagga Warshadaha Xingjin Nanyang Road Shishi City Fujian Gobolka Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Alaabada Kulul - Khariidadda bogga - AMP Mobile
Guddiga Waraaqaha Waraaqaha leh Eva, Maro Nonwoven Dahaarka leh Eva xumbo, Cirbadda Cirbadda Aan Dhicin, Kabaha Xaashida Insole, Dhar aan Xakameyn oo leh Eva, Guddiga Insole oo leh Eva,